Faah faahinta dhaawaca uu mudada la maqnaanayo xiddiga Arsenal ee Alexandre Lacazette & Xilliga uu soo laaban karo - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Faah faahinta dhaawaca uu mudada la maqnaanayo xiddiga Arsenal ee Alexandre Lacazette & Xilliga uu soo laaban karo
Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Arsenal ee Alexandre Lacazette ayaa la shaaciyey goor dhow inuu garoomada ka maqnaan doono muddo lix todobaad ah kaddib markii qalliin looga sameeyey jilibka sida ay kooxdiisu xaqiijisay.
Xiddiga xulka qaranka Faransiiska ee Lacazette ayaa qalliin looga sameeyey jilibka lugta bidix saakay oo Talaado ahayd, taasoo 26-sano jirkaan seejinaysa garoomada ugu yaraan afar isbuuc.
Lacazette ayaa bedel lagu soo geliyey kulankii dhawaa oo ay Gunners guuldarrada kala kulantay Tottenham Hotspur, kaddib markii Tababare Arsene Wenger uu safka hore ee kulankaas u doortay saxiixa cusub ee Janaayo uu sameeyey Pierre-Emerick Aubameyang.
Weeraryahankan ayaa la filayay inuu u ciyaaro kooxdiisa Arsenal tartanka Europa League Jimcaha, laakiin Aubameyang ayaa xaq u yeelanaya haatan inuu kooxda u metelo tartankaas, ciyaaryahanka reer Faransiiska ayaana haatan ka maqnaan doona Gunners labada kulan ee Wareegga 32-ka Kooxood ee ay la ciyaarayaan Ostersunds.
Si kastaba ha ahaatee, Lacazette ayaa la filayaa inuu garoomada ku soo laaban doono dhammaadka bisha soo socota ee Maarso.